कोरोनाको ‘नयाँ भेरियन्ट’सँगै फेरि लकडाउनको सम्भावना कति? – Health Post Nepal
कोरोनाको ‘नयाँ भेरियन्ट’सँगै फेरि लकडाउनको सम्भावना कति?
२०७७ चैत ११ गते १९:५१
गत वर्ष आजकै दिन नेपालमा लकडाउन गरिएको थियो।
चैतमा गरिएको लकडाउन ५ महिनासम्म निरन्तर चल्यो।
लकडाउनका कारण सबैको जनजीवन कष्टकर बन्यो।
लकडाउनको १ वर्ष पुग्दै गर्दा नेपालमा पुनः कोरोनाको संक्रमणको दोस्रो लहर सुरू भएको आकंलन गरिएको छ।
संक्रमण बढेसगैं धेरै जनमानसको मनमा चिसो पसेको छ– सरकारले पुन लकडाउन गर्ला?
यो प्रश्न हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीसँग सोधेका छौं।
‘अहिले नै लकडाउन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पुगेको छैन,’ डा. अधिकारीले छोटो जवाफ फर्काए।
‘संक्रामक रोगको महामारीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो बनाउन, कर्मचारी व्यवथापन र नागरिकलाई जनचेतना पुर्याउने उदेश्यले लकडाउन गरिन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यो रोगको बारेमा अधिकांशलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले नै लकडाउन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था आएको छैन।’
तर, संक्रमणको भार थेग्न नसकेको अवस्थामा लकडाउनकै आवश्यकता रहने उनको भनाई छ।
दोस्रो लहर रोक्ने सरकारको यस्तो रणनीति
नेपालले यसभन्दा अगाडी संक्रामक रोगको महामारी चुनौति सामना गर्नुपरेको थिएन।
त्यसबखत संक्रामक रोगको विषयमा धेरै मानिस अनविज्ञ नै थिए।
स्वास्थ्यकर्मी तथा नागरिकलाई कोरोनाको बारेमा बुझाउन गाहे अवस्था थियो।
‘तत्कालीन अवस्थामा सरकारले सही समय उचित निर्णय गरेको थियो। जसको कारण संक्रमणले तीब्रता लिन पाएन। अहिले त यो रोगका बारेमा सबै जानकार छन् नि!’ डा.अधिकारीले भने।
सरकारले सिमाना नाकामा कडाई, अनिवार्य परीक्षण गर्ने, आशंका गरेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाएको छ।
अहिले त्यहीअनुसार कै रणनीति मार्फत् काम गर्दै जाने डा. अधिकारीको भनाई छ।
समय अनुसारको संक्रमण चक्रका लागि अन्य उपायले काम गरेन भने विज्ञहरूले तथ्यांक विश्लेषण गरेर दिएको आधारमा आवश्यक निर्णय सरकारले लिने छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि हामीसँग भएको जनस्वास्थ्यकै मापदण्ड पालना उचित हुन्छ।’
नयाँ भेरियन्टको फैलिएको आशंका
केही महिना यता दुई अंकमा रहेको संक्रमित संख्या केही हप्ताबाट उकालो लागेको छ।
मगंलबार मात्रै १ सय ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा कोरोना दोस्रो लहर सुरू भएसँगै नेपालमा संक्रमण बढ्नुले खतराको संकेतको रूपमा लिइएको छ।
खुल्ला सिमानाले सहज ओहोर–दोहोरले पनि अब नेपालमा सहजै नयाँ भेरियन्ट फैलने विज्ञले बताएका छन्।
युरोपेली देशमा अहिले कोरोनाको दोस्रो—तेस्रो लहर सुरू भएको छ।
केही दिन यता नेपालमा बढेको संक्रमित संख्याले पनि दोस्रो लहरको संकेत गरेको प्रष्ट पार्छन्, डा. अधिकारी।
‘भारतमा केसहरू बढ्दै जानु र भारइरसका नयाँ भेरियन्ट परिवर्तनले हामीलाई थप जोखिम थपिदिएको छ,’ उनले भने, ‘भारतबाट फर्किएका व्यक्तिलाई संक्रमण पुष्टि भएसँगै नयाँ भेरियन्ट भित्रिएको भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।’
केही दिनयता भारतका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरखण्डमा संक्रमणको बढ्दै गएको छ।
‘भारतका विभिन्न प्रान्तमा पुनः कोरोना संक्रमण फैलिएको छ।
केही स्थानमा लकडाउन समेत भएको छ। त्यहाँ काम वा व्यवसाय गरेर बसेका मानिस नेपाल फर्केने क्रम दिन–दिनै बढेको छ।
‘संख्यात्मक रूपमा कम हुँदै गए पनि जोखिम कायम नै थियो। तर, भारतमा तिर्थयात्रा गर्ने क्रममा आवज–जावत हुँदा, श्रम तथा व्यवसाय गर्ने ओहोर–दोहोरले झन् जोखिम बढाएको छ,’ उनी भन्छन्।
‘पछिल्लो ७ दिनको तथ्यांकले बढेसँगै थप जोखिम बढ्दै गएको महसुस भएको छ। महामारी नियन्त्रणमा नआउँदा सबै नागरिक जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपाउनुपर्थ्यो। तर, सो काम हुन सकेन,’ उनले भने।
संख्यात्मक रूपले कोरोना घटे पनि जोखिम कायम थियो। तर, नागरिक कोरोना छैन भने जसरी हिँड्ने थाले। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउँदा थप जोखिमलाई बढुवा दिएको उनको भनाई छ।
के–हो कोरोनाको दोस्रो लहर?
कोरोना लहरलाई पानीको तरगंसँग जोडेर हेर्छन् डा. अधिकारी।
माहामारी एकैपटक अन्त्य हुँदैन। त्यसका लागि वर्षाैं लाग्छ। त्यसबीचमा विभिन्न उतार चढाव आइरहन्छ।
‘पानीको छालजस्तै हुन्छ संक्रामक रोगको उतार–चढाव। तल माथि भइरहन्छ। तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्।
युरोपका देशहरूमा संक्रमणको तरंग डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ।
संक्रमणको चक्रलाई हेर्दा नेपालमा पनि चाँडै दोस्रो लहरको सामना गर्नुपर्ने विज्ञको तर्क छ।
कोरोना लहर रोक्न जनस्वास्थ्यको पालना अनिवार्य
कोरोना दोस्रो लहर रोक्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न आवश्यक रहेको डा. अधिकारीको भनाई छ।
‘हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कति कडाईका साथ सुरू सुरूमा गरेका थियौँ। त्यो बिस्तारै कम भएसँगै जोखिम थपिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारी नियन्त्रणमा आए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड दीर्घकालीन पालना गर्नुपर्दछ।’
जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएसँगै कोरोना संक्रमण मात्रै होइन अन्य सरूवा रोग लाग्नबाट पनि जोगाइरहेको छ।
नेपालमा हाल १७ लाख मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। तर, खोप लगाएर सबैले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेका छैनन्।
‘एक व्यक्तिमा मात्रै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएर हुँदैन। समुदाय स्तरमा विकास हुनुपर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट जोगिन जनस्वास्थ्यको मापदण्डको अनिवार्य हुन्छ।’
दोस्रो लहर घातक हुनसक्छ
कोरोना दोस्रो लहर संक्रमण दर र त्यसको प्रभावका दृष्टिले पहिलो लहरभन्दा घातक हुनसक्ने डा. अधिकारी बताउँछन्।
‘युरोपका देशहरू अहिले फैलिएको कोरोना घातक किसिमको देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘संक्रमण कम गर्नको लागि सरकार लागि परेको छ।’
पहिलो लहरको संक्रमणको अवस्थालाई थाहा पाउन सरकारले सेरो—प्रिभिलेन्स सर्भे गरेको थियो। जसमा १४ प्रतिशत मानिसमा कोरोनाभाइरसको विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएको पाइएको थियो।
सेरो–प्रिभिलेन्स सर्भेलाई हेर्दा विगतमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर विगतमा ठुलो संख्या संक्रमित हुनबाट जोगिए पनि दोस्रो लहरमा सावधानी नअपनाए संक्रमण दर बढ्ने निश्चित छ।
बढ्दो कोरोना संक्रमणको ग्राफ
गत, बुधबार २७ सय ९० नमुना परीक्षण गर्दा १ १४ जनामा संक्रमण देखियो भने कोही पनि संक्रमितको मृत्यु भएको थिएन ।
बिहीबार २७ सय ८१ जनामा परीक्षण गर्दा ९४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
शुक्रबार ३ हजार २ सय ५४ वटा नमुना परीक्षण गर्दा १७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
त्यस्तै शनिबार ३१ सय ६१ नमुना परीक्षण गर्दा १२५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो, जसमध्ये कास्कीमा ४८, काठमाडौंका ३० जना, भक्तपुरमा १० र ललितपुरमा ५ जना थिए । र, बाँकी संक्रमित अन्य जिल्लाका थिए ।
त्यस्तै आइतबार ३१ सय ८१ नमुना परीक्षण गर्दा ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि देखिएको थियो । संक्रमितमध्ये ३४ जना काठमाडौं र ५ जना ललितपुरका थिए ।
सोमबार परीक्षण बढाएर ४ हजार ४ सय ७२ र्पुयाइएको थियो र, १५० जना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो २४ घण्टामा ३ जनाको मृत्यु समेत भएको छ।
मगंलबार ४ हजार ३२ जनामा पिसिआर परीक्षण गर्दा १ सय ८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यस्तै आज ३ हजार ९ सय ६३ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा १ सय ४५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।